Munamato wekutambisa murume. ? [Kuti uwane wanano yako]
Munamato wekutaurisa murumeKuchengeta runyararo pamba nguva dzose ibasa rakaoma uye dzimwe nguva rinoda rubatsiro rweWamwari. Munamato wekutaurisa murume kuunza kuwedzera kutsungirira, rugare uye chiyero kurudo rwako.
Munhu wega wega anoteerera zvakasiyana mumamiriro ezvinhu akaoma muhupenyu. Kana murume wako ari kushushikana zvakanyanya kubasa kana zvinhu zvikasafamba sezvaakaronga, ita munamato uyu kudzikisira murume ane nzara.
Izvo zvakajairika kuti kushushikana kwese kwenguva dzakaoma kudzokorora munharaunda yemhuri. Kana mumwe wako aine dambudziko rakawandisa, munamato wekuuraya murume akatsamwa uye nekukurumidza murume asvika munguva yako.
Nokutenda zvinokwanisika kudzosa kuwirirana mumba uye roorano yako ichava inofadza.
1 Munamato wekutaurisa murume
2 Munamato wekuuraya murume wekukurumidzira
3 Holy Amanso munamato wekushungurudza murume
4 Munamato kumurume akachengetwa - Mutsvene Tame
5 Munamato kumurume akachengetwa - Saint Catherine
6 Maitiro ekunamata munamato kuti tede murume
“Ishe, ndinopinda pamberi penyu izvozvi. Ishe vakakura, Ishe vane simba, Ishe ndeMumwe.Hapana mumwe Mwari asi imi uye chete ndimi munogona kubatsira kuti imba yangu ibudirire. Batsira murume wangu kuti ave murume ari nani, kugadzikana, kundibata neruremekedzo rwakawanda, kuita zvirinani neni uye nevana vedu. Zvinomudzidzisa maitiro ekuvandudza semurume, sababa, semusoro wemhuri. Ndinoda kuti imba yangu ibudirire, asi izvi zvakaoma zvinoshungurudza hukama hwedu. Uye ndipeiwo huchenjeri kuti ndikwanise kubata nemurume wangu nechinangwa chekuona hunhu hwangu uye kuve nekufemerwa kuti ndivandudze, kuve ndakadzikama, kushaya hasha, kudanana uye shamwari zhinji dzangu. Ndatenda mberi nechikomborero chandichawana. Uye ini ndinokumbira iwe zvakare kuti undidzidzise maitiro nenzira chaiyo naye kuti ndichinje gwara rake. Ameni.
Munamato wekuuraya murume wekukurumidzira
“O, vatsvene vane masimba!
Kuti iwe unzwisise kuchema kunobva pamoyo wangu.
Iyo inogona kunzwa rudo rwandinonzwa (semuenzaniso, zita remudiwa).
Ndinokumbira kuti mundibatsire kukunda (taura zita remudiwa) chokwadi, ((taura zviri kuitika muhupenyu hwako) uye unzwe kuti ndinogona kukurasa zvachose!
Ndireverere, bata moyo wako unotaridzika sedombo!
Kana kunyange dhongi rakapusa ratumirwa newe, ipapo ndoziva kuti chikumbiro changu chinogoneka. Ameni.
Holy Amanso munamato wekushungurudza murume
Munamato kumurume akachengetwa murume - Mutsvene Maka
«(Taura pano zita remunhu waunoda kudzikamisa),
Dai Saint Maka akudzikunure uye udzorere kutsamwa uku uye hasha dzaunogara uchitakura mukati mako, izvo zvinonetesa mweya wako pamwe nemweya wako.
(Taura pano zita remunhu anoda kudzikisira),
Saint Mako akadzipedza shumba, zinyoka uye zvisinga fungidzike uye nesimba rake anokwanisa kumuita kuti amuise, ave nehasha, kutsamwa kwake uye nemhirizhonga yake yaagara akatakura.
San Marcos inogona kubata moyo wako, ita kuti ive yakapfava, yakareruka uye yakawanda manzwiro.
Ichabata mweya wako uye ichisunungura kubva pahasha dzese nekumukira kwese kwainoita.
Inozoita kuti muviri wako urambe uchipera, wakasununguka uye wakanyarara.
St. Mark anoshandisa simba rake rese kukudzikisira pasi uye kubvisa kutsamwa kwese kwawakave nako kubva pawakabarwa. Zvichabvisa chiratidzo ichi chinotyisa kuti iwe uri mumwe munhu akasiyana, munhu ari nani uye akadzikama.
(Taura zita remunhu waunoda kudzikamisa),
Ini ndinopikira kuna Jesu Kristu kuti akatakura muchinjiko nekutambudzika kukuru zvekuti achafara uye nekugara zvachose, kuti achazove munhu akasiyana kubva zvino zvichienda mberi uye kuti haazombonzwa kutya sekare.
Iwe unodzinga kutsamwa uku kamwechete uye zvachose uye uchave uri nani uye akadzikama munhu.
Munamato kumurume akachengetwa - Mutsvene Tame
«(Taura zita remurume anotya),
Dai Saint Meek akakumisikidza iwe, dai Saint Meek ichikudzikamisa iwe uye dai Jesu Kristu vakunyorova.
Dai Holy Tame ikabvisa iyi kutsamwa nehasha izvo dzimwe nguva zvinosunungura vanhu vasina kunaka.
(Taura zita remurume ane nzara),
Dai Mai Meek vakabata izvi nehasha pakarepo vobvisa. Viga matambudziko ako ese uye gadzirisa pamwe nehasha dzese dzakabatana navo.
Dai vane Simba uye vakangwara Musande weTame vakwanise kubvisa izvo zvakaipa izvo zvinoshungurudza mhuri yako uye izvo zvinokunzwa uchivhunduka.
Saint Tame ichakuporesa, bvisa kutsamwa uku kwese, kushungurudzika uku kwese uye kunoita kuti iwe uve nesimba rekutarisana nematambudziko ako ese pasina kutsamwa nehasha pasina chikonzero.
Holy Tame, inoporesa kutsamwa kwemurume wangu, inomuita panguva yakaoma uye yakaoma yehupenyu hwake.
Batsira mweya wako, munhu uye hunhu kuti uwedzere kuchinjika uye utsungirire zvakaipa zvichauya.
Musande Tame anokudzora, anokudzikamisa uye obvisa zvakaipa zvese zvauinazvo.
Munamato kumurume akachengetwa - Saint Catherine
"Santa Catarina, iwe watambura zvakanyanya muhupenyu hwako, iwewe wakapinda mune zvisina kufanira munhu kufambidzana, ndinokumbira utarise mukati mangu nemhuri yangu uye undibatsire nemurume wangu (taura zita remurume iro).
Anotya zvikuru, akatsamwa kwazvo uye anotopenga, uye ndinoziva kuti handigoni kufara.
Ndinovavarira kuzviyedza, uye imwe chete zvakare, saka ndinokukumbira kuti undibatsire kudzikama.
Nyarara murume wangu Santa Catarina, dzikamisa moyo wake, dzikamisa pfungwa dzake.
Iyo inokubatsira iwe kurarama nenguva dzakaomesesa dzehupenyu hwako, kunyanya iyo inonyanya kushungurudza iyo, uye inodzivirira nzara dzako kuputika zuva rega rega, husiku hwese neminiti imwe neimwe.
Inopa kugadzikana mumoyo mako, inokupa zororo mupfungwa nepfungwa uye inopera pfungwa dzese dzakaipa dziri mumusoro mako dzinokuita kuti utye.
Ndibatsireiwo pazuva iri rinotyisa Santa Catarina.
Ndibatsireiwo, mhuri yangu nemurume wangu kuti tigopedzisira tave kufara zvechokwadi.
Ndinotenda mamuri Santa Catarina. Ameni.
Maitiro ekunamata munamato kuti tede murume
Minamato yemumba inoratidzwa pano inogona kunamatwa pamwe chete kana zvakasiyana. Nekuvanyengeterera, iye anodzikama apo ari kukumbira kubatsirwa kusimbisa murume wake.
Kana iwe uchida kutaura iyi minamato kune vasande vakasiyana, hapana dambudziko zvakare. Izvi zvakanakawo nekuti zvinowedzera mikana yekukumbira kwako kuzadzikiswa.
Kunamata kupingudza murume kunogona kuitwa mazuva ese. Sezvineiwo, iwe unofanirwa kuipinza mune imwe nguva mune yako tsika kuti ugare uchiyeuka kunyengetera. Kunyanya iwe uchinamata, ndiko kuwedzera kubatana kwako kuna Mwari.
Kana uchinamata kuti ushe murume, iwe unofanirwa kuve nekutenda kwakakura uye kutenda kuti Ishe vanozoita kuti mumwe wako agadzikane uye agadzikane, zvisinei kuti ndeapi mamiriro ako.
Asi chenjera: Mutsara unoshanda chete kana chinangwa chazvo chakanaka. Kana iwe uchida kudzikamisa murume wako kuti imba yako ibudirire, uye iye ave murume ari nani, ipapo iwe uri munzira yakanaka.
Asi kana iwe uchida kudzikamisa murume wako kuti ave mushandiri wake, ziva kuti munamato uyu haushande zvachose. Munamato wekutaurisa murume unoshanda chete kana chinangwa chiri mumoyo make chisina kunaka.
Nakidzwa nekuisa munamato uyu mumaitiro ako uye zvakare geza vhidhiyo inotevera ichaunza rugare kumhuri yako.
Dzidzawo iyo munamato wekudzosera muchato.